Shina fanindroany tsindry mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Fanamboarana tsindrona indroa dia dingana famolavolana plastika izay amboarina roa ny bobongolo amin'ny milina tsindrona iray mba hamorona ampahany iray amin'ny fitaovana plastika roa samihafa.
Famolavolana tsindrona indroa (antsoina koa hoe famolavolana indroa mitifitra, tsindrona loko roa).
Ny famolahana tsindrona indroa dia dingan'ny famolavolana plastika izay amboarina roa ny bobongolo amin'ny milina tsindrona iray mba hamorona ampahany amin'ny fitaovana plastika roa samihafa. Indraindray ny fitaovana roa dia samy hafa loko, indraindray ny fitaovana roa dia samy hafa ny hamafiny sy ny fahalemeny, ka mahazo ny toetra ilaina amin'ny mekanika sy ny hakanton'ny vokatra.
Ny fampiharana ny bobongolo plastika fanindroany ary ny ampahany
Ny faritra plastika novokarina na dia teo aza ny famolavolana tsindrona indroa dia efa be mpampiasa amin'ny vokatra elektronika, fitaovana elektrika, vokatra ara-pitsaboana, fitaovana ao an-trano, kilalao ary saika ny sehatry ny plastika rehetra. Ny famokarana sy ny famolavolana ny bobongolo misy loko roa, ary koa ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny milina famolahana tsindrona roa-loko ary ny akora ho an'ny famolahana tsindrona roa-loko dia nitombo haingana ihany koa.
Asehoy ny tranga misy faritra roa-tsindrona
Karazana plastika roa no ampiasaina, ary ny vokatra plastika izay azo avahana tsara amin'ny karazany roa amin'ny plastika dia antsoina hoe faritra roa-tsindrona.
Inona no tombony azo amin'ny famolavolana tsindrona indroa?
Raha ampitahaina amin'ny famolavolana tsindrona nentim-paharazana dia manana ireto tombony manaraka ireto ny dingana famolavolana co-injection roa tonta:
1. Ny sosona anatiny sy ivelany amin'ireo faritra dia mandray fitaovana samy hafa manana ny mampiavaka azy, toy ireo izay manana tanjaka tsara amin'ny sosona anatiny sy ireo izay misy loko na voamaina amin'ny ety ivelany, mba hahazoana vokatra feno sy bika.
2. Ny fandrindrana malefaka mafy: ny vatan'ny ampahan'ny ampahany dia mampiasa fitaovana mafy, ny faritry ny fivondronana izay mampiasa resina malefaka malefaka (TPU, TPE) dia afaka mitarika vokatra mikatona tena tsara amin'ny vokatra, toy ny tsy tantera-drano, vovoka.
3. Araka ny toetra mampiavaka ny fampiasana azy, toy ny sosona ambonin'ireo faritra mavesatra dia mampiasa resina plastika malefaka, ny vatana na ny votoatin'ny ampahany dia mampiasa resina plastika mafy na plastika mihosin-drambo dia afaka mampihena ny lanjany.
4. Ny akora fototra ambany kalitao dia azo ampiasaina hampihenana ny vidiny.
5. Ny votoatin'ny ampahany dia afaka mampiasa fananana lafo vidy sy manokana, toy ny fanelingelenana anti-electromagnetic, fitondra avo lenta ary fitaovana hafa hampitomboana ny fahombiazan'ny vokatra.
5. Ny velarana na ny votoatin'ny ampahany dia azo vita amin'ny akora lafo vidy miaraka amin'ny fananana manokana, toy ny fanelingelenana anti-electromagnetic, fitondra-tena avo lenta ary fitaovana hafa hampitomboana ny fahombiazan'ny vokatra.
6. Ny fampifangaroana araka ny tokony ho izy ny fitaovana kortika sy ny fotony dia afaka mampihena ny adin-tsaina sisa tavela, mampitombo ny tanjaky ny mekanika na ny fananana ambonin'ireo faritra.
7. Raha ampitahaina amin'ny overmolding dia manana tombony lehibe amin'ny kalitao, ny vidiny ary ny famokarana azy io.
Ny lesoka amin'ny famolahana tsindrona indroa
1. Ilaina ny mampiasa vola amin'ny fividianana ny milina fanefena indroa-tsindrona.
2. Ny fampifangaroana ny bobongolo-tsindrona roa dia mitaky mazava tsara: ny lasitra aoriana dia manana fepetra mitovy. Rehefa miova ny famolavolana ny vokatra dia tsy maintsy manao fanovana mitovy ny bobongolo roa hahazoana antoka fa mitovy. Manampy ny enta-mavesatra amin'ny fikolokoloana ny maty izany.
3. Masinina manamboatra tsindrona indroa dia ny bobongolo roa tsiroaroa mizara ny habaka sy ny herin'ilay masinina famolahana tsindrona iray, ka tsy azo tsindrona ireo vokatra marobe.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny dingan'ny famolavolana tsindrona indroa sy ny fizotrany mihoampampana
Ny famolahana tsindrona indroa sy ny fihoaram-pefy dia samy mandrafitra ny tsindrona fanindroany, saingy samy hafa be izy ireo.
1. Ny bobongolo amin'ny fihoaram-pefy, izay fantatra ihany koa amin'ny famolavolana faharoa, dia entina amin'ny milina famolavolana tsindrona mahazatra. Ny vokatra dia niforona tamin'ny dingana roa. Aorian'ny fanesorana ny vokatra amin'ny andiana bobongolo iray, dia ampidirina amina lasitra iray hafa ho an'ny famolavolana fanindronana faharoa. Noho izany, ny milina famolavolana tsindrona mahazatra dia ampiasaina amin'ny fizotran'ny fanodinana.
2. Ny famolavolana tsindrona indroa dia karazana fitaovana plastika roa atsindrona amin'ny milina fanorohana tsindrona iray, miforona indroa, fa ny vokatra dia mivoaka indray mandeha ihany. Amin'ny ankapobeny, ity karazan-dàlana famolavolana ity dia antsoina koa hoe famolavolana tsindrona roa sosona, izay mazàna vita amin'ny lasitra roa ary mila milina famolahana indroa manokana.
3. Ny famolahana tsindrona indroa dia fomba famokarana mitohy. Tsy misy fandidiana ny famoahana sy ny fametrahana ny ampahany eo afovoany, ny fitsitsiana fotoana sy ny hadisoana amin'ny fametahana indray ny faritra, mampihena be ny tahan'ny famokarana tsy mahomby, ary manatsara be ny kalitaon'ny vokatra sy ny fahombiazan'ny vokatra raha oharina amin'ny fizotra mihoampampana.
4. Ny fizotry ny fihoaram-pefy dia mety amin'ny famolavolana tsindrona ireo vokatra misy kalitao ambany sy baiko kely. Voafetran'ny famaritana ny milina famolahana indroa indroa, amin'ny ankapobeny dia tsy mety amin'ny famolahana tsindrona ny ampahany lehibe kokoa.
5. Ny lasitra roa eo anoloana amin'ny bobongolo-tsindrona roa dia tsy maintsy mitovy, ary ny lasitra encapsulation dia tsy manana an'io fepetra io. Noho izany, ny marim-pototra sy ny vidin'ny lasitra fanindronana roa sosona dia avo kokoa noho ny lasitra fanindronana voafintina.
Ny toro-hevitra amin'ny fizotran'ny famolavolana indroa:
1. Ao anatin'ny dingan'ny famolavolana tsindrona indroa indroa, misy ny singa efatra tena ilaina: ny milina famolahana tsindrona indroa, bobongolo tsindrona roa, fitaovana plastika sahaza ary famolavolana ampahany mety.
2. Fisafidianana fitaovana amin'ny famolavolana tsindrona matevina malefaka sy mafy. Tsy maintsy misy fahasamihafana eo amin'ny maripana eo anelanelan'ny teboka miempo roa karazana fitaovana ho an'ny famolahana tsindrona loko roa. Amin'ny ankapobeny dia asaina avo kokoa noho ny an'ny tsindrona faharoa ny teboka mitsonika ny fitaovana fanindronana faharoa, ary ny haavon'ny lelan'ny tsindrona voalohany avo kokoa noho ny an'ny fitaovana fanindronana faharoa.
3. Filaharana tsindrona amin'ny fitaovana mangarahara sy tsy mangarahara: ny tifitra voalohany dia vita amin'ny fitaovana tsy mangarahara, ary ny tifitra faharoa kosa vita amin'ny akora mangarahara. Ohatra, ny fitaovana tsy mangarahara dia mazàna PC misy hafanana avo lenta, ary PMMA na PC no ampiasaina amin'ny fitaovana mangarahara faharoa. PC dia mila arovana amin'ny famafazana UV. PMMA dia afaka misafidy UV na manamafy. Raha misy tarehin-tsoratra eny ambonin'ny dia tsy maintsy misafidy UV izy.
Inona no atao hoe milina fametahana tsindrona roa?
Ny milina famolahana tsindrona miaraka amin'ny barika roa sy ny rafitra tsindrona ary ny fiovaovan'ny toeran'ny lasitra dia antsoina hoe milina famolahana tsindrona indroa, izay ampiasaina amin'ny famolahana tsindrona miloko roa. Ny milina famolahana tsindrona mazàna dia manana karazany roa: milina famolahana tsindrona mifanila amin'ny visy tsindrona ary milina famolahana tsindrona mitsivalana miaraka amina visy tsindrona
Inona ny mould tsindrona indroa?
Ny bobongolo izay manindrona karazana plastika roa milahatra ary mamokatra vokatra miloko roa dia antsoina hoe bobongolo roa. Ny lasitra fanindronana miloko roa dia mazàna bobongolo roa amin'ny ampahany iray, mifanaraka amin'ny tifitra voalohany sy faharoa. Ny maty aoriana (maty lahy) ny roa maty dia iray ihany, fa ny maty eo aloha (vehivavy maty) kosa samy hafa.
Ny bobongolo-tsindrona roa dia tsy maintsy apetraka amin'ny milina fanenomana indroa mba hamokarana ara-dalàna.
Torohevitra amin'ny famolavolana bobongolo fanindroany
1. bobongolo atiny sy ny lavaka
Ny ampahany miforona amin'ny bobongolo-tsindrona roa dia mitovy amin'ny an'ny lasitra fanindronana ankapobeny. Ny maha samy hafa azy dia ny fihenan'ny lasitra fanindronana amin'ny toerana roa dia tokony heverina ho mitovy, ary ny bobongolo concave dia tokony hiara-hiasa tsara amin'ireo totohondry roa. Amin'ny ankapobeny, kely kokoa ity karazana plastika ity.
TATRATRA fampidirana tsindrona roa
2. Mekanisme fanesorana
Satria ny faritra plastika misy loko roa dia azo aorina fotsiny aorian'ny tsindrona faharoa, dia tsy handeha ny môtô demoulding amin'ny fitaovana fanindronana voalohany. Ho an'ny milina tsindrona mihodina mitsivalana, ny mekanisma fanesorana ny milina fanindronana dia azo ampiasaina amin'ny fandroahana eject. Ho an'ny milina fanindronana mihodina, ny mekanisma fanesorana ny ezine dia tsy azo ampiasaina. Ny mekanika fanesorana ny fivoahana hydraulic dia azo apetraka eo amin'ny latabatra rotary.
3. Rafitra Gating
Satria endriny fanindronana indroa izy io, ny rafitra gating dia mizara ho rafitra fampidirana tokana sy ny rafitra fanindronana faharoa, izay avy amin'ny fitaovana famolahana tsindrona roa.
4, ny tsy fitovizan'ny fototr'ireo bobongolo satria ny fomba famolahana indroa-tsindrona dia manokana, mila fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa izy, ka tokony hitovy ny haben'ny sy ny refin'ny roa amin'ireo fitaovana fitarihana maty. Ho an'ny bobongolo tsindrona mihodina, ny haavon'ny famaranana ny bobongolo dia tokony hitovy, ary ny afovoan'ny lasitra roa dia tokony ho eo amin'ny tariby mihodina ihany, ary ny mahasamihafa azy dia 180. Ho an'ny milina famolavolana tsindrona mihodina, roa ny bobongolo tokony ho eo amin'ny axis iray ihany.
Fampivoarana ny famolahana tsindrona indroa
Avy amin'ny toetra sy ny fampiharana ny famolavolana loko maro loko ary ny famolavolana ny tsindrona mpiara-tsindrona roa, dia azo jerena fa hisy fironana hanoloana tsikelikely ny fizotran'ny famolavolana nentin-drazana amin'ny ho avy. Ny teknolojia famolavolana tsindrona fanavaozana dia tsy vitan'ny fanatsarana ny maha-marina ny fizotry ny famolahana tsindrona, fa manokatra ny sehatry ny fizotran'ny tsindrona. Ny fitaovana sy ny paikady fanontana vaovao dia ampy hamaly ny fitomboan'ny fangatahana vokatra maro karazana, avo lenta ary avo lenta.
Mestech dia manolotra moldinnng indroa indroa amin'ny trangan'ny fiara, akorandriaka vita amin'ny tànana, trano fitenenana, bokotra fanalahidy, tahony ary vokatra roa misy loko na roa hafa mandritra ny taona maro, mifandraisa aminay raha misy fangatahana.
Previous: Masinina fanindronana plastika
Manaraka: Ampahany plastika amin'ny jiro tsy misy alokaloka